Namuhla ngavuswa ngomoya omuhle. Ngacabanga ngezinhlelo zekusasa, ngezimpelasonto. Uzikhumbule, ngesikhulu sami isondo selinciphile, alinamaphutha, kusho ukuthi kuyadingeka ukulungisa. Njalo isikhathi angizange ngithole, nobuvila. Uye wema ebhaleni izinyanga ezintathu esiteji esivamile. Lapho ngifaka khona, ngazibuza ukuthi wonke umuntu uzoyibona, impela ibhodi lizovalwa, kodwa uma kwenzeka "liboshwe" nge-anti-ukweba ekuthunjweni kwesimbi.
Imicabango yami yaphulwa ngumakhelwane owabika izindaba ezibuhlungu. Okubi kakhulu. Ngisho nokulwa nobugebengu akuzange kusize. Ngangithukuthele "izinyembezi," ngoba cishe sekusha, ngisindise izinyanga eziyisithupha. Yebo, kungabizi kakhulu, ngizozithengela ngokwami, kepha ... kuhlambalaza. Umakhelwane ovela ngezansi weluleka amaphoyisa ukuba abhale isitatimende. Kodwa ubani odinga lokhu, emaphoyiseni, ukuba afune ibhayisikili? Ngiyaqiniseka ukuthi ngeke bazame ngisho!
Lapha ngihlala futhi ngicabanga. Abantu bathenga izimoto nsuku zonke kubanikazi bemoto . Kwabanye, ukuchitha imali eyizigidi ezihamba ngemoto kuvamile, bathola imali enjalo ngonyaka, kodwa kukhona abanye abaye bahlala iminyaka eminingi. Ngakho, uthenge imoto, uyibeke eduze komnyango, uyajabula. Futhi ukuvuka okuhle okuhle, kubukeka ngefasitela ... opa! Kodwa ayikho imoto. Kubuhlungu, ukuhlambalaza, ukungaqondakali, kodwa akuyona icala elihlukile! Iyini amathuba ukuthi amaphoyisa azomthola?
Kungani abantu, bechitha imali eningi emotweni, abakwazi ukuchitha kancane emshwalense ukuze balale ngokuthula. Akekho ongabanjwa nabaphangi, bakhetha ngisho nezimoto ezingabizi futhi ezisetshenzisiwe. Ngeshwa, amabhayisikili awaqinisekisi ukweba, ngingathanda ukukhokhela umshwalense ngenjabulo, kodwa manje inkampani yomshuwalense izobuyisela izindleko zebhayisikili kimi. Futhi kanjalo, ukusindisa konke okusha. Kulungile, kuhle. Ungathenga enye entsha ngesikhathi sokubusika. Futhi imoto? Kubalulekile ukulondoloza isikhathi eside, futhi ngemuva kwakho konke lokhu imali ingasetshenziswa kwenye, into ewusizo.
Nginike isibonelo salokho okungahle kwenzeke kumpahla yakho, futhi unquma ukuthi lokhu kungenzeka yini kuwe noma cha, kungakhathaliseki ukuthenga umshwalense noma cha. Wonke umuntu kufanele azicabange ukuthi angazisebenzisa kanjani nokuthi angazivikela kanjani imali yakhe. Inhlanhla.
Indlela yokuqinisekisa ubuqiniso bomshuwalense we-MTPL ngezindlela ezihlukahlukene
Imithetho ye-OSAGO: ngokufishane mayelana nokuyinhloko
Umshuwalense wezokwelapha eRussia kanye nezici zayo. Ukuthuthukiswa komshuwalense wezokwelapha eRussia
Isijeziso se-OSAGO: kanjani ukubala?
Indlela ukupheka irayisi the esihlwabusayo ngesitimu?
Ukrainian nezincwadi zokufunda Library eMoscow: nehlazo indaba